Fafao soa aman-tsara ny fampahalalana amin'ny voafafa-Delete | Avy amin'ny Linux
Fafao soa aman-tsara ny fampahalalana amin'ny famafana azo antoka
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Ho an'ireo toa ahy paranoida ary maniry ny hamafa fampahalalana amin'ny rafitr'izy ireo amin'ny fomba tsy azo sitranina (na saika), ity misy vahaolana.
Andao hapetraka ny fonosana: hamafana-hamafa
Avy eo dia ho ampy ny fampiasana ny baiko srm ary hamafana ny lahatahiry na rakitra tadiavintsika soa aman-tsara.
Ahoana ny fampiasana an'ity?
Tsotra. Rehefa mamafa voafafa ao amin'ny rafitray izahay, raha ny tena izy dia tsy nesorina ny fampahalalana, fa tao amin'ny HDD dia "nasongadina" fa 'poakaty' ireo sehatra mandray an-tsoratra an'io data io, avy eo rehefa mandika zava-baovao amin'ny HDD-tsika rehefa mandeha ny fotoana , Little by Little dia tena esorina amin'ny fampahalalana mibodo ireo sehatra voalaza na nanisy marika teo aloha ireo.
Eny, ny zavatra ataon'i srm dia mamafa ny fampahalalana toy ny fanaontsika mahazatra, fa tsy izany ihany, fa manoratra sy mamafa matetika imbetsaka amin'ny habaka mitovy amin'ny angona voafafa, izany hoe mamafa sy manoratra, mamafa ary manoratra, amin'ity. fomba mahatonga azy io saika tsy azo ataoRaha tsy hoe manana fitaovana manokana toa ny CIA, FBI, NSA, sns izy ireo) hahatratra ny famerenana ny vaovao voafafa.
Ohatra, raha hamafa rakitra dia izao:
Raha te hamafa fampirimana iray miaraka amin'ny atiny rehetra aho:
srm -r carpeta-personal/
Ity no hazavaiko, maharitra ela, fa lava kokoa noho ny mahazatra. Aza adino fa nosoratana sy voafafa imbetsaka izy io, mazava ho azy fa handany fotoana betsaka kokoa noho ny mahazatra ity. Saingy mazava ho azy ... raha misy zavatra mila zavatra dia andoavany vola izany, raha maniry ny hanafoana ny fampahalalana araka izay azo atao isika dia haharitra kely izany 😉
Na izany aza, raha tianao ny handany fotoana kely kokoa dia azonao atao ny mampiasa ny masontsivana -l Ny ataon'ity dia ny fanoratana sy ny famafana indroa fotsiny no hanoratany azy, hampandeha haingana kokoa ny famafana fa tsy ho azo antoka toy ny aorin'izy io.
Na izany na tsy izany dia heveriko fa tsy misy zavatra hafa tokony ampiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fafao soa aman-tsara ny fampahalalana amin'ny famafana azo antoka
Hard drive tsy mandeha tsara izay mianjera eo am-pelatananao .. Mihevitra ve ianao fa tsara ny fanesorana fanoratana im-betsaka amin'ny sehatra iray ihany? Reniko .. xDD
Fa ho an'ny maika ...
Manuel de la Fuente dia hoy izy:
Azoko tsara izao ny antony nahatonga ny kapila mafy maro nipoaka, hahaha. Ny iray amin'ny zavatra toy izao izay hataony amin'ny mahantra. o_O
KZKG ^ Gaara dia hoy izy:
Omeko ny safidy, malalaka ny mpampiasa hisafidy na hampiasa azy ireo na tsia 😉
Valio amin'i KZKG ^ Gaara
Gonzalo dia hoy izy:
Raha tsy tianao ny hamerenana ilay rakitra dia mendrika izany
Fantatrao ve hoe impiry ianao no nanoratra tamin'ny sehatra mitovy amin'ny kapilao? Sa mihevitra ianao fa tsy misy fetra ny kapilao ary tsy manongotra sehatra velively?
Mamaly an'i Gonzalo
tannhausser dia hoy izy:
Mahaliana ny programa, tsy nahalala azy. Hatramin'izao dia nampiasa Bleachbit aho na ilay Shred iray ihany izay mamela anao hisafidy ny isan'ny fotoana hanoratana rakitra iray, ankehitriny manana safidy iray hafa izahay rehefa miantso ny varavarana xDD ny CIA
Mamaly an'i tannhausser
mpaneho hevitra dia hoy izy:
Ny hany fomba hamafana soa aman-tsara (Ary izany dia izao) dia ny fandringanana ara-batana.
Valiny ho an'ny mpaneho hevitra
Ny fandringanana ara-batana dia mazava ho azy fa ny fomba azo antoka indrindra, ankehitriny na amin'ny fampiasana ireo fomba natolotry ny manam-pahaizana manokana na ny DoD dia tsy azo atao ny tsy mahazo mamerina vaovao mifandraika, antenaina sombina mitoka-monina izay raha tsy ampiarahana karazana fitsapana hafa na data fotsiny dia tsy hanana izany. tsy misy sanda.
* tsy azo atao mihitsy hahahaha: facepalm:
Tsy manam-bola hividianana kapila mafy isaky ny te hanafina ny ratsy nataoko 0.o aho
Ralehilahy, fa misy ny haitao fanafenana, eto dia misy lahatsoratra tsara momba io lohahevitra io.
lalàna dia hoy izy:
Azonao atao ny manoratra ny kapila mangarahara iray manontolo miaraka amin'ny angona angovo
Valiny amin'ny mpisolovava
Bill dia hoy izy:
Loharano tsara, angamba ny anaran'ny Paositra dia tokony "mamafa ny rakitra mandrakizay"
Satria ny "azo antoka" dia havana, kapila mafy. XD.
Mamaly an'i Guillermo
SynFlag dia hoy izy:
Heveriko fa tsy ilaina izany, taona maro lasa izay dia nisy baiko antsoina hoe shred.
$ shred -u pass.txt
Raha paranoida kokoa ianao:
$ shred -n 200 -z -u pass.txt
Konozidus dia hoy izy:
Efa namaky $ shred ve ianao?
Milaza mazava tsara fa amin'ny rafitra fisie maoderina dia mety hanoratra adiresy ara-batana hafa noho ny rakitra hamafana izy, ary ankoatry ny hafa dia manondro ext3, noho izany dia heveriko fa amin'ny ext4 noho ny fitovizany dia tsy hiantoka fiasa ihany koa izy io.
Raha mampiasa fitaovana toy izany ianao dia satria tianao ho azo antoka fa voafafa sy voasoratra ny adiresy ara-batana marina, noho izany dia tsy misy ilana azy intsony ankehitriny, raha tsy mampiasa rafitra fisie efa antitra toa fat32, ext2, sns.
Valiny tamin'i Konozidus
Fahazoana mpampiasa roa dingana ho an'ny Ubuntu amin'ny fampiasana Google Authenticator
Azo alaina ao amin'ny Firefox 20